Eto Ny “Sokajim-Pampitandremana” Hilaza Aminao Ny Famoretan’ny Polisin’i Hong Kong Amin’ireo Mpanohana Ny Demaokrasia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jolay 2014 17:13 GMT
Polisy manampahefana mijery ireo sora-baventy fampitandremana ary toa “tsy mahatakatra akory ny dikan'izy ireo”, hoy i Kacey Wong, mpanakanto nanatontosa ny asa-kanton'ny fihetsiketsehana. Sary avy amin'i Kitwa Ho, nahazoan-dalana.
Zatra ny taham-pankasitrahana ambony eo amin'ireo mponina ao an-tanàna noho ny fahakelezan'ny heloka bevava ny polisy ao Hong Kong. Na izany aza, tao anatin'ny herintaona sy tapany mahery, nijotso avy amin'ny 71 isanjato mankany amin'ny 54,5 isan-jato izany fankasitrahana izany, fijotsoana noho ny fahitana fa nanjary fitaovana politika hoan'i Hong Kong sy ny governemanta Shinoa ireo polisy mba hanasazy ireo fihetsiketsehana milamina sy hitsabaka amin'ny fanangonam-baovao eo amin'ny toerana isian'ny tranga.
Te-hitabataba amin'ny fanararaotam-pahefana i Kacey Wong, mpanakanato ao an-toerana sady profesora lefitra ao amin'ny Sekoly fianarana ravaka ao amin'ny Oniversite politeknikan'i Hong Kong, ka namorona ny “Sokajim-Pampitandremana Hongkongey” izy, fampisehoam-pihetsiketseha-panoherana tokana izay notontosaina tao amin'ny hetsiky ny mpanohana ny demaokrasia ao an-tanàna tamin'ny 1 Jolay.
Ny ” Sokajim-pampitandremana” dia fitambarana olona marobe mitafy tahaka ny polisy ary milanja sora-baventy izay aingam-panahy avy amin'ny sora-baventy fampiasan'ny polisin'i Hong Kong rehefa mifampiraharaha amin'ny hetsi-panoherana. Ireo Marika dia ahitana hoe “Love the Party (Tiavo ny Antoko)” izay manondro ny Antoko Komonista Shinoa; “Fake Commie (Komonista Sandoka)”; “Party-State (Fanjakana-Antoko)” manondro ny fitondrana Antoko tokana ao Shina; “Reddening” (Fandokoana manontolo ho mena) manondro ny fanakendana ataon'ny komonista; “Land Grabbing (Fakana Tany an-Keriny)” manondro ny fakana tany hanaovana ny tetikasam-pampandrosoana ao amin'ny Sisintany Vaovao ao Avaratra-Atsinanana ary ny “Corruption (Kolikoly)”.
Ity ambany ity ny lahatsary narakitra tamin'ny fihetsiketsehana:
Olona maro ao Hong Kong, zanatany britanika taloha no matahotra ny fahazoan'i Shina vahana ao an-tanàna. Nandritra ny fihetsiketsehana tamin'ny 1 Jolay, nitaky fifidianana demaokratika marina amin'ny fifidianana izay ho mpitondra ny tanàna manaraka amin'ny taona 2017 ireo mpanao fihetsiketsehana. Nampanantena fifidianana mivantana i Beijing, saingy nampitsahatra tampoka ny fanomezan-dalana ny Hongkongey hifidy kandidà.
Raha tsy mahavita mametraka fanitsiana tsy misy ireo kandidà efa nankatoavina mialoha ny governemantan'ny tanàna, dia mikasa hibodo ny afovoan-tanànan'i Hong Kong am-pilaminana ny vondrona “Occupy Central” farafahatarany amin'ity taona ity. Nandritra ny sit-in taorian'ny fihetsiketsehana 1 Jolay izay nantsoin'ny vondrona ho fanazarantany amin'ny fibodoana, dia olona maherin'ny 500 no nosamborina.
Nanazava ny hevitra ambadiky ny “Sokajim-pampitandremana” nandritra ny antsafa niarahana tamin'ny Global Voices i Wong. Misy ny “ahiahy ankapobeny amin'ny fampiharana amin'ny ampahany ny lalàna” (mizana tsindrian'ila) ataon'ny polisy, hoy izy. Mandeha “fanahy iniana” aorian'ireo mpanao fihetsiketsehana manohana ny demaokrasia izy ireo, tahaka ilay mpitondra kamiaon'ny fihetsiketsehana izay nosamborina niaraka tamin'ireo mpandeha efatra nandritra ny hetsika tamin'ny 1 Jolay. Nilaza ny polisy fa nanitsakitsaka didim-panjakana mandràra ny famelomana moteran'ny fiara mandeha miadana izy.
Saingy tsy ampiharana fepetra henjana tahaka izany kosa ireo mpanao fihetsiketsehana mpanohana an'i Beijing, na dia mahery setra aza izy ireo, hoy i Wong. Tamina tranga maro, rehefa manafika ireo mpanao fihetsiketsehana manohana ny demaokrasia ireo mpanao fihetsiketsehana manohana an'i Beijing, dia fiampangana noho ny hetraketraka madinika sy onitra an'arivony dolara HongKongey no vesarina amin'izy ireo. Hoan'ireo mpanao fihetsiketsehana mpomba ny demaokrasia kosa, ampangaina ho nihetraketra tamin'ny polisy, nanao fanimban-javatra, sy fihetsiketsehana tsy ara-dalàna izay mety midika volana vitsivitsy am-ponja izy ireo.
Ireny fepetra ireny dia vokatry ny fitadiavan'ny polisy hahazo sitraka amin'ny governemantan'i Hong Kong sy Beijing, hoy izy. “Izy ireo no mifehyvoalohany ny polisy manampahefana” :
Such top-down pressures of selective enforcement will not only affect the morale of junior officers but also lead to the eventual collapse of the system. Recent cases show that the city’s anti-corruption agency and police complaint council are no longer functioning to keep powers in check. In short, the kind of power abuse and authoritarian repression we see in the Mainland is actually not far from our very own reality.
Tsy amin'ny fomba fiheveran'ireo manampahefana fehezina ihany no miantraika izany fanaovana mizana tsindiran'ila izany fa mety mitarika amin'ny firodanan'ny rafitra. Mampiseho ireo tranga faramparany fa tsy mandaitra intsony hitazonana ny fahefana mikorosofahana ireo sampan-draharaha miady amin'ny kolikoly sy ny vaomieram-pitarainana ao amin'ny polisin'ny tanàna. Raha fehezina, tsy lavitra intsony amin'ny zavamisy eto amintsika ny karazana fihoaram-pefy sy ny fanenjehana amin'ny fomba jadona fahitantsika any amin'ny Tanibe.
Nalaza tao amin'ny media sosialy ny sarin'ny “Warning Squad” (Sokajim-pampitandremana) fotoana fohy taorian'ny fihetsiketsehana. “Fihetsiketseham-panoherana iny amin'ny endriny kanto sy fampisehoana. Fampisehoana manakorontana sy mihantsy (polisy) indrindra hitako eto Hong Kong,” hoy ny mpaneho hevira iray, Maureen Nienaber nanoratra tao amin'ny Facebook.
Nihevitra i Wong fa ny fanehoan-kevitry ny olona dia taratry ny disadisa miakatra eo amin'ny olona sy ny polisy : “.Fitondrana mpanao kolikoly, sy fitondrana mpanao kolikoly tsy refesi-mandidy tanteraka. Raha tsy mandray an-tanana araka ny tokony ho izy izao toe-draharaha sarotra izao ny governemanta, dia mety hirodana tanteraka ny rafitra.”
Na dia eo aza ny famoretana, maro ireo vonona hiady hoan'ny demaokrasia tena izy izay nampanantenaina ny vahoaka ao Hong Kong sy efa nandrasana fatratra nandritra ny taona maro. Araka ny nolazain'i Wong hoe:
What is the point of groaning and moaning without doing anything? Why not combine art and politics and take it to the streets: for righteousness, justice, and freedom. Sometimes it is not because you see the possibility of change that you decide to be persistent, but it is because of your persistence, there is change.
Inona no antony himenomenonana sy hitarainana raha tsy manao na inona na inona? Maninona no tsy mampiaraka ny kanto sy ny politika ary mitondra izany eny an-dalambe: ho amin'ny fahamarinana, ny rariny ary ny fahafahana. Indraindray, tsy hoe satria mahita ny mety hisian'ny fanovana ianao vao manapa-kevitra ny hikiry, fa noho ny fikirizanao no isian'ny fanovana.